Nilaza i Tesla fa afaka 10 taona dia hanana herinaratra mora vidy isika | Fanavaozana maintso
Nilaza i Tesla fa ny bateria sy ny masoandro dia manondro ny lalana mankany amin'ny herinaratra mora vidy ao anatin'ny 10 taona
Manuel Ramirez | | Toekarena an-trano, About us
Teknolojia fitehirizana angovo dia iray amin'ireo fanalahidy hampalaza ny famokarana angovo avy amin'ny masoandro Ary io no teboka niantohan'ny lehiben'ny teknolojia Tesla hanome fihaonambe momba an'io karazana angovo madio io.
JB Strauble, TCO an'i Tesla, niresaka nandritra ny fihaonambe mba hiresaka ny hatsaran'ny batterie lithium-ion ary satria tena ilaina amin'ny masoandro sy ny rivotra ny fitehirizana angovo, rehefa latsaka amin'ny faravodilanitra ny takariva ary mitsahatra tsy miakatra ny rivotra.
Tetikasa fitahirizana angovo tsy mila ampifangaroina amin'ny fanavaozana foana izy ireo. Ny mpandraharaha sasany any California sy any atsinanan'i Etazonia dia mividy ireo rafitra fitehirizana ireo hanatsarana ny fahombiazan'ny tambajotrany elektrika.
Etsy ankilany voatazona Strauble fa hianjera haingana kokoa noho ny nandrasana ny vidin'ny bateriaToy izany koa no hitranga amin'ny fangatahana fitaovana amin'ny fitehirizana angovo, izay hiara-miasa amin'ireo panneaux solaires. Ny fitambarana dia hamorona herinaratra andoavam-bola mora vidy kokoa noho ny lasantsy fosily.
10 taona no omen'i Strauble mba hananantsika herinaratra mora vidy miaraka amin'ny fahaleovan-tena angovo toa tsy mbola hitantsika teo aloha.
Tonga io faminaniana io mifototra amin'ny drafitr'asan'i Tesla manokana hamoronana orinasa mpamokatra bateria lithium-ion manana fahaizana lehibe any Nevada izay hanomboka hamokatra ireo karazana vokatra ireo amin'ny taona ho avy. Ny orinasa dia natao hampitomboana ny fahafaha-mamokatra ho 50 gW isan-taona amin'ny taona 2020, ampy hampandehanana fiara 500.00 Tesla.
Tesla dia mbola eo am-bavan'ny olona rehetra satria hamoaka ny safidiny roa ho bateria an-trano amin'ny Mey izy io, iray ho an'ny trano ary iray ho an'ny orinasa lehibe kokoa. Ny kinova fonenana dia noforonina manokana mba hifanaraka tsara amin'ny zoron'ny garazy. Na dia vao haingana aza isika dia nianatra ny fomba fitomboan'ny fahafaha-mitahiry amin'ny vidiny mitovy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Nilaza i Tesla fa ny bateria sy ny masoandro dia manondro ny lalana mankany amin'ny herinaratra mora vidy ao anatin'ny 10 taona
Pedro Valderrama dia hoy izy:
TARANAKA ENERGY MADIO SY MORAORA AVY AMIN'NY FOMBA INAGOTALE.
13 Jul (2 andro lasa izay)
ho an'ny mg.gregory
Green Solutions 360 LLC, dia orinasa Venezoeliana miditra an-tsehatra amin'ny tontolon'ny angovo misy solika ho an'ny solika fôsily; mamorona vahaolana mahomby amin'ny angovo madio sy azo havaozina avy amin'ny loharano tsy mety ritra.
Amin'izao fotoana izao dia manana prototypes enina (6) isika; efatra (4) amin'izy ireo avy amin'ny angovo azo havaozina tsy mahazatra (NCRE), ny iray manana angovo hafanana amin'ny masoandro ary ny iray manana angovo onja.
Ho fanampin'izay, izahay dia namolavola hevitra afaka mamandrika CO2 sy metaly mavesatra sy matevina hafa avy amin'ny fandotoana misy eny amin'ny rivotra; mifanentana tanteraka amin'ireo prototypes voalaza etsy ambony; afaka manambatra azy ireo amin'ny endrika feno.
Miasa izahay mba hanararaotana ireo hery tsy miovaova omen'ny planeta antsika amin'ny fomba maimaim-poana, maimaim-poana ary mitohy tsy mijaly mandritra ny fotoana fohy, manova azy ireo ho hetsika mitohy na tsy tapaka amin'ny fomba mirindra (manova ny angovo kinetika ho angovo mekanika) toy ny ankamaroany Ny loharanom-baovao dia avy amin'ny angovo azo havaozina fantatra mandraka ankehitriny, ankoatra ny Photovoltaics.
Ny prototype mahomby indrindra azontsika atao dia afaka mihoatra ny famokarana angovo turbin-drivotra imbetsaka; tsy misy intermittency misy fiatraikany, ohatra, angovo rivotra.
Ity prototype ity dia eo am-pandinihan'ny United States Patent Office, ambanin'ny No. us 61 / 704,554 miaraka amin'ny status "patent pending", izay ahafahantsika mivarotra azy, mampiroborobo azy, mitady alliances ary ny hetsika miandry rehetra hampivelatra ny fahafahany feno.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny alàlan'ny prototypot antsika dia ny azo refesina tanteraka. Amin'ny alàlan'ny fanovana kely ny famolavolana azy am-boalohany sy ny fitazonana ny foto-kevitra niaviany dia afaka mamaly ny fangatahana takiana amin'ny toerana ilana izany izy, mamokatra azy (eo amin'ny toerana), izay miteraka fitehirizana sarobidy amin'ny vidin'ny fanovana angovo, fiakaran'ny herinaratra ary fizarana. ny angovo herinaratra.
Ny famerenam-bola amin'ny famatsiam-bola dia saika eo noho eo, raha jerena ny tahiry amin'ny famokarana angovo sy ny fihenan'ny vidiny raha jerena ny fitohizan'ny famokarana 24 ora tsy misy fahatapahana.
Ny rafitra izay mitroka ny CO2 avy amin'ny tontolo iainana, manadio sy manatsara ny toetran'ny rivotra, mamandrika andiana loto maloto sy mpamatsy solosaina amin'ny vahaolana, dia tsy miankina amin'ny famokarana angovo; Na izany aza, rehefa atambatra ny famokarana angovo amin'ny rafitra fanadiovana sy fanatsarana ny toe-pahalotoana sy ny fandotoana, manintona lehibe ho an'ireo tanàna maniry ny hanolotra tontolo iainana tsara sy salama kokoa ho an'ny olom-pirenena, manasa ny fifaninanana mahasalama sy mahomby eo amin'ny tanàna, izay tsy maintsy karakaraina mankany amin'ny "maintso".
Ity dingana ity dia tsy voatery satria tsy manelingelina ny famokarana angovo izany, nefa manome lanja fanampiny ho an'ny fikolokoloana ny tontolo iainana sy ny fahasalamana; miteraka fanatsarana lehibe eo amin'ny kalitaon'ny fiainan'ny olom-pirenena amin'ny tontolo ekolojika.
Zava-dehibe ny milaza ny lanja akademika an'ity tolo-kevitra manan-danja ity, ka izany no manokatra varavarana hikarohana momba ny paikady mahomby kokoa hanomezana fivezivezena ny planeta sady manaja azy ary manararaotra azy tsara.
Ny angovo ampiasain'ny prototypotika dia ny hery misintona ary koa ny hery tsy tapaka hafa izay omen'ny planeta antsika; Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ho rafitra gravitational na motera, izay manafaka azy amin'ny intermittence ary miaraka amin'ny fitaovana mekanika no ahatongavan'ny valiny, mamadika azy ho motera pluripotential mitohy na tsy tapaka; izay mamela ny fanovana ny hetsika kinetika ho mekanika; fepetra takian'ny mpamokatra herinaratra tsirairay avy hamokarana herinaratra. ENERGY dia hetsika.
Fantatsika fa ity fampahalalana ity dia mety ho tena sarobidy ary zava-dehibe ny hilazana ny lanjan'ity akademika ity, izay manokatra varavarana hikarohana momba ny paikady mahomby kokoa hanomezana fivezivezena ny planeta ary hanaja azy ary hanararaotra amin'ny fomba mahomby ny fisian'izy ireo malalaka hery ho an'ireo izay liana Mikarakara ny tontolo iainana sy hanaiky ny filana maika hamaranana ny fiankinan-doha amin'ny solika fôsily izay manimba ny tontolo iainana; mandany loharanon-karena sarobidy ho an'ny fampandrosoana ny angovo herinaratra ilaina.
Manolo-tena amin'ny angovo hafa izahay ary resy lahatra fa ny solika fôsily dia tokony ho ilay ¨FOSILES are ary misokatra izahay hiandry ny fifampiresahana hiteraka fifanarahana ao anatin'ny fepetra azo ifampiraharahana ao anaty fifandraisana mandresy satria vokatry ny rafitray.
Miandry ny valiny ara-potoana sy amin'ny fotoana mety aminao izy, dia nanao veloma izy:
Telefaona +00580212 3832135
Finday +0580412 0116095
Mamaly an'i pedro valderrama
Tsy hiteraka vanin-dranomandry kely amin'ny 2030 ny masoandro
BMW mametraka 100% tracteur-tranofiara eny amin'ny arabe